ⓘ ခန် ဒန်းနီယယ်
Kang Daniel သည်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှအောင်မြင်သောအဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, Produce 101 Season 2အစီအစဉ်တွင်ပထမရသောကြောင့် လူသိများခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသားအဆိုတော် အဖွဲ့ wannaone ၏အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် အနုပညာအလုပ်များလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် တစ်ကိုယ်တော်အနေဖြင့် အနုပညာနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေပြီဖြစ်သည် ။
1.1. သက်မွေးမှု အစောပိုင်းဘဝ နှင့် မအောင်မြင်ခင်
ကန်ဒန်နီရယ်သည် ကန်အွီဂယွန်း 강의건အဖြစ်ဖြင့် ဘူဆန်, တောင်ကိုရီးယား တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။တစ်ဦးတည်းသောသား ဖြစ်သည်။ နာမည် တရားဝင်ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းမှာ မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးများကပင် အမည်ဟောင်းကို အသံထွက်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒန်နီရယ်သည် အတန်းပိုင်ဆရာ၏ အကြံပေးမှုကြောင့် အကပညာကို စတင်သင်ယူခဲ့သည်။ Hello Counselor ဟူသော ရသစုံအစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်ခဲ့စဉ်က သူငယ်ငယ်မူလတန်းကျောင်းသားဘဝ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကြောင့် စနောက်ခံခဲ့ရကြောင်း ဝါသနာပါရာ အကဖြင့်သာ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်တည်ဆောက်ခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒန်နီရယ်သည် Produce 101 Season2ပြိုင်ပွဲမဝင်ခင် ၂နစ်နင့် တစ်လကြာ လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ အစက B2M Entertainment တွင် စတင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် MMO Entertainment ၏ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သင်တန်းသားဘဝတွင် Backup Dancer တစ်ယောက်အနေဖြင့် အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသည်။
1.2. သက်မွေးမှု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ WannaOne အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့်
၂၀၁၇ တွင် ဒန်နီရယ်သည် Produce101 Season2 တွင် MMO Entertainment ၏ သင်တန်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် YMC Entertainment အောက်တွင် WannaOne အဖွဲ့တစ်ဦးအနေဖြင့် အနုပညာလောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇၊ ဩဂုတ်လ၊ ၇ရက်တွင် 1×1=1 To Be One ဟူသော အခွေဖြင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။ ပွဲဦးထွက်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်း MBC ၏ တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော Its Dangerous Beyond The Blanket အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၇ ရက်တွင် ပြသခဲ့သည်။ ထိုလတွင်ပင် တစ်ဟုန်ထိုး ကျော်ကြားလာသော သူ့အကြောင်းကို တောင်ကိုးရီးယား၏ နာမည်ကြီး Weekly Chosun magazine တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလထုတ် InStyle Korea fashion magazine ၏ မျက်နာဖုံးတွင် ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၄နစ်ကြာအတွင်း ပထမဆုံးဖော်ပြခြင်းခံရသော အမျိုးသားအနုပညာရင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုနောက် SBS ၏ Master Key အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး 2017 SBS Entertainment Awards ဆုပေးပွဲတွင် လူသစ်တန်းဆု ရသစုံအစီအစဉ်များအတွက် ကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ တွင် ဒန်နီရယ်သည် တစ်ကိုယ်တော်အလုပ်များခဲ့ပြီး Davichi ၏ "Days Without You" 너 없는 시간들 သီချင်းတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို Its Dangerous Beyond the Blankets အစီအစဉ်၏ ဒုတိယတွဲတွင်လည်း ဆက်လက်ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်ဖြင့်ပင် 2018 MBC Entertainment Awards ဆုပေးပွဲတွင် လူသစ်တန်းဆုကို ရခဲ့သည်။ Wanna One အနေဖြင့်လည်း Wanna One ၏ အဖွဲ့ခွဲ Triple Position ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ "Triple Position" သည် 2018 Mnet Asian Music Awards ဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ခွဲဆုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်တွင် Wanna One အဖွဲ့သည် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၄-၂၇ ဖျော်ဖြေပွဲများအပြီးတွင် အဖွဲ့ကို တရားဝင်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဒန်နီရယ်သည် ဖျက်သိမ်းပြီးသည်အထိ Wanna One အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့် ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် ဆက်လက်ပါဝင်ခဲ့သည်။
1.3. သက်မွေးမှု ၂၀၁၉ တစ်ကိုယ်တော်အနေဖြင့်
ဒန်နီရယ်သည် Korean Corporate Reputation Research Institute ကထုတ်ပြန်သည့် Male Model Brand Power Ranking နင့် Individual Boy Group Members Brand Power Ranking ဇယားများတွင် ထိပ်ဆုံးကသာ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ အကုန်တွင် Gallup Korea က ကောက်ယူခဲ့သော စစ်တမ်းအရ ဒန်နီရယ်သည် လူကြိုက်အများဆုံးအိုင်ဒေါလ်အဆိုတော်စာရင်းတွင် ဒုတိယဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီတွင် ဒန်နီရယ်၏ အမည်သည် Forbes Korea ၏ 2030 Power Leaders in entertainment စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Gallup Korea ၏ စာရင်းအရ ၂၀၁၈အတွက် ငါးယောက်မြောက် လူကြိုက်အများဆုံးအိုင်ဒေါလ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ဇွန်လ ၁၂ရက်တွင် ဒန်နီရယ်၏ အေဂျင်စီက ဒန်နီရယ်သည် ဘူဆန်မြို့၏ သံအမတ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ဧပြီလက ဘူဆန်မြို့ကို ကိုယ်စားပြုမည့် ထိုရာထူးအတွက် မဲပေးသည့်အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဘူဆန်မြို့သူမြို့သားများက ဒန်နီရယ်ကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ တရားဝင် သံအမတ်ခန့်အပ်ပွဲကို ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လ ၉ရက်၊ Sajik Baseball Stadium တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဘူဆန်မြို့တော်ဝန် Oh Keo-don ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုပွဲတွင် ဒန်နီရယ်သည် KBO League ဘေ့စ်ဘောပြိုင်ပွဲအတွက် ceremonial first pitch ကို ပစ်ခွင့်ရခဲ့သည်။
Wikipedia: ခန် ဒန်းနီယယ်